Kali Linux 2019.4 ikozvino yavapo, ine mufananidzo mutsva uye dzimwe nhau | Linux Vakapindwa muropa
Ivo vakativimbisa chimwe chinhu chinoshamisa uye heino ichi: Kali Linux 2019.4
Anogumbura Security akativimbisa chimwe chinhu "chinoshamisa" imwe nguva yapfuura uye ivo vakachengeta vimbiso yavo. Nguva pfupi yapfuura, ivo vakatanga KaliLinux 2019.4, yechina yakagadzika vhezheni ye2019 iyo yasvika nenhau zhinji dzinonakidza. Kune avo vasingazive kugoverwa kweLinux, iri sisitimu yekushandisa yakanyatsogadzirirwa kutarisa kuchengetedzeka kwemamwe marudzi esoftware uye Hardware. Muenzaniso unoshanda ndewekuti unotibvumidza kuti tione kana yedu netiweki yeWiFi inoshandisa password uye / kana kuchengetedzwa kwakachengeteka.
Sezvatinogona kuona mu kusunungura chinyorwa, Kali Linux 2019.4 inosvika izere nenhau. Pakati pevakakurumbira, tinogona kutaura izvozvo vakavandudza chimiro chavo kana ivo vakagadzirisa iyo kernel kuLinux 5.3.9. Pazasi iwe une runyorwa rweakanyanya kushambadza nhau dzakasvika pamwe neazvino vhezheni yakagadzika yeiyi yetsika yekugovana kugovera.
Pfungwa dzeKali Linux 2019.4
Nyowani default graphical nharaunda: XFCE. Inogumbura Chengetedzo inoti iyo nyowani graphical nharaunda inopa zvirinani kuita mune imwe yazvino mufananidzo.
Mutsva weGTK3 theme (yeGNOME uye XFCE).
Kali Undercover maitiro akaverengerwa.
Kali Gwaro rine kutanga nyowani uye ikozvino rave kugoneswa neGit.
Veruzhinji Kuisa - inokutendera iwe kuti uwedzere maturusi edu kuKali.
Kali NetHunter KeX - Yakazara Kali desktop kubva kuApple.
BTRFS panguva yekumisikidzwa.
Zvakajairika bug kugadzirisa uye kugadzirisa.
Izvo zvinofanirwa kupatsanurwa zvakasiyana ndezve NetHunter KeX, iyo inotibvumidza isu kuti taroorane Android chishandiso kune HDMI kuburitsa uye keyboard uye mbeva kuti tiwane desktop desktop neKali. Mune ino modhi, injini ingangove nharembozha yedu:
Ichi chiitiko chaunofanira kuona kuti utende. Kusvikira iwe uchinge wazviona, iwe haugone kunyatsonzwisisa izvo izvi zvinopa. Iine foni yakasimba zvakakwana, izvi zvakafanana nekushandisa yakanaka yakazara-inotakurika inotakurika ARM tafura inokodzera muhomwe yako. Nzira dzinogona kushandisa dzeichi mukutarisa dzakakura
KaliLinux 2019.4 ikozvino iripo kubva pawebhusaiti yekurodha pasi weprojekiti iwe yaunogona kuwana kubva Iyi link. Senge mu Shanduro dzakapfuura, inowanikwa mune zvakajairwa uye Chiedza shanduro uye mune MATE, GNOME, KDE, LXDE uye ARMhf graphic environments, kuwedzera kune XFCE izvozvi nekukasira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Ivo vakativimbisa chimwe chinhu chinoshamisa uye heino ichi: Kali Linux 2019.4